SOOMAALIYEEY WAX WADDA QABSADA
KU: DOWLADDA ISU-TAGGA KU-MEEL-GAARKA EE
KU: URURKA MAXKAMADAHA ISLAAMIGA AH EE
KU: URURKA HOOYOOYINKA SOOMAALIYEED
KU: URURKA GANACSIGA EE SOOMAALIYEED
KU: URURADA DHALINYADDA SOOMAALIYEED
KU: URURADA SAMAFALKA SOOMAALIYEED
KU: BULSHAWEYNTA CAALAMKA
KU: CIDDII AY QUSEEYSO
Tix: 01/sifll/07 Tariikh: 09/14/07
UJEEDDO: SOOMAALIYEEY WAX WADDA QABSADA
Waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay is-daba qabtaan oo ay kawada tashadaan aayatiinkooda iyo jiritaankooda ayagoo dhan shishe iska dhigay danaha shisheeye ee ay ugu kala hawlan yihiin waddamada Soomaaliya danaynaaya.
Soomaaliya waxaa cadow u ah ciddii ka shaqeynaysa danaha shisheye iyo kuwo ku nool laaluusha lagu siiyo wax is-daba marinta.
Fadlan waxaan si khaas ah uga codsanayaa labada dowladdood ee kala ah Eritrea iyo Ethiopia inay faraha kala baxaan siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya.
Soomaaliya waxaa ka jira xeer beeg ama xeer dhaqameed lagu kala furdaamiyo dhibka iyo tallooyinka murugsan isla-markaasna waxaa Ilaahay naga dhiga in aan nahay dad muslim ah oo leh diinta diimaha ugu sax san taasoo kala caddeynaysa wixii xun iyo wixii wanaagsan.
Ehtiopia iyo Eritrea waxaa ka dhexaysa dagaal soo jiraan ah sida Soomaaliya iyo Ethiopia ay dhexayso cadaawada faran badan oo taariikhiyan ah marka ummaddaneey maxaa idin ka si ah oo aad isku wadda haysataan.
Soomaaliya lama qabsan karo ilaa aad idin ka u sahashaan in la qabsado oo waliba dhulkiina hooyo la idin ku gumeysto!!!
Soomaaliya waxay kamid tahay shanta dal ee dunniddan Ilaahy ugu dhammeystiray wax walba oo qaninimo balse aaway maxkax looga faa’iideysan lahaa qaninimada.
Soomaaliya waa meesha kaliya ee noqon karta saldhiga ganacsiga baddaha Afrika iyo Asia taasoo waddamada halkan ku xusan aynan marnaba dooneyn inay noqoto:
1. United Kingdom of Saudi Arabia
7. The rest of the International Community
Nasiib darro, laba nin oo aanu dadkoodii u badbaadinay oo ayaga iyo dadkoodiiba aan ka xoreeynaya cadowgoodii madaxa uga taagnaa ayaa maalin-walba qasaya dhulkeena!!!
Mudane Meles Senawi oo ah wassirka koowaad ee dowladda Ethiopia iyo Mudane Isais Afworki oo ah madaxweynaha dowladda Eritrea ayaa waxay si dadban u wadda dhabar jabinayaan shacabweynaha Soomaaliyeed marka ummad yahay seenu waxyeelnaa!!!
Soomaalida waligood wey is-dagaashaa!!! Weyna ka heshiisaa ee maxay naga rabaan dowladdaha doonaya inay ka sii shaqeeyaan baaba’ eena!!!
Sideedaba waxaa nabaddoonka shirka nabadda noqon kara qof aan shacabweynaha Soomaaliyeed waxba ka tabaneyn oo aan waligiis gelin eed, aano iyo musuqmaasuq. Aadbay foolxumo u aheyd in shaqsiyaad dambiilayaal ah ay noqdaan shir gudoonkii shirka dib-uheshiisiinta qaranka Somaaliya.
Dowladda Isu-tagga Ku-Meel-Gaarka ee Soomaaliyeed waxay si aad ah ugu guuldarraysatay jagga u magacaawida dambiilayaashii baabi’iyey mirimagaydada sida kuwo haaya jaggooyinka wasaaradaha iyo taliska booliska Soomaaliyeed!
Amb. Badal Weyrax Kaariye
Madaxweynaha Machadka Soomaaliyeed Baritaan Afafka Shisheeye